Tag: ịhụnanya | Martech Zone
Psychology na ROI nke Agba
Fraịdee, June 5, 2020 Satọde, 6 Juun 2020 Douglas Karr
M a ọkpọ maka a agba infographic… anyị na-ama bipụtara otú genders ịkọwa agba, agba, mmetụta uche na mbọn na ma na agba mmetụta ịzụ omume. Ihe omuma ihe omuma a na akowaputa akuko banyere uche na obula na nloghachi nke ulo oru nwere ike iru site n’ilekwasị anya na agba ndi ha n’eji aru oru. Mmetụta uche nke agba na-adabere na ahụmịhe nke onwe karịa na ihe agwara anyị na ha ga-anọchite anya ya. Agba acha uhie uhie
Ndị ahịa gị ha hụrụ gị n'anya?
Wednesday, February 12, 2014 Tuesday, February 11, 2014 Douglas Karr
Ndị ahịa gị ọ hụrụ gị n'anya? Ihe omuma ohuru sitere na Responsys na-ekpughe otu uzo ndi mmadu nwere ike isi jigide mmekorita nke ndi mmadu na ndi ahia ma zere mmebi na-enweghị isi. Nnyocha nyocha na-egosi na ndị na-azụ ahịa na-adaba na ụdị mgbe ozi ha bụ akụkụ nke ahụmịhe nke ndị ahịa na-agbakọ oge, gafee ọwa na dịka omume na mmasị onye ọ bụla si dị. Iji usoro ziri ezi na azịza ya n’ebe ọ bụla, mmekọrịta ndị ahịa ọ bụla nwere ike ịbụ mbido mara mma